Plastic Collapsible Containers ( ခေါက်ထားနိုင်သော ပုံးများ ) - BaganMart
National Jumbo Box ( ပစ္စည်းထည့်နိုင်သော တွန်းလှည်း )
BEST STAR DCT 5000 L( ရေတိုင်ကီ )
အရည်အသွေးကို စိတ်ချရတဲ့ Water Tanks
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 943 view counts
စြေးနူနျး : 43600 Kyats per Box (s)
အနညျးဆုံး အရအေတှကျ :2Box (s)
Brand : NPC ( National Plastic Co.,Ltd )
Model : NCC703
လုပျငနျးအမညျ : MFPG Korea Plastic
ဖုနျးနံပါတျ : 95-9420054291, 95-9973792021
Capacity 73L : 655x445x330(80)mm
Internal Loading : 15kg
အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဒီဇိုင်းလှပသေသပ်သော ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် NPC brand ပလတ်စတစ်ပုံးဖြစ်ပါသည်။ ပေါ့ပါးပြီးမာကြောသောကြောင့်သုံးရလွယ်ကူပြီးခေါက်ထားနိုင်သောကြောင့်နေရာယူသက်သာသောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ရေလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
Our company name is MFPG establish in 2015. Our company have authorization from NPC, Korea National Plastic group that is top plastic brand in Korea. So we are the first distributor of NPC brand in Myanmar.
For Plastic Collapsible Containers ( ခေါက်ထားနိုင်သော ပုံးများ )
May I get the quotation for "Plastic Collapsible Containers ( ခေါက်ထားနိုင်သော ပုံးများ )" ?